Gobollada iyo Degmooyinka dalka Soomaaliya oo Maanta si isku mid ah looga Tukaday Ciida Barakeysan ee Ciidul Adxa. | JILYAALE_ONLINE
Gobollada iyo Degmooyinka dalka Soomaaliya oo Maanta si isku mid ah looga Tukaday Ciida Barakeysan ee Ciidul Adxa.
Maanta oo Isniin ah, Bisha Dul-xijah ay tahay 10,1429, kuna beegan 08, December 2008 waxay Ummadda Islaamka ay u tahay maalin farxadeed oo ah “Ciid Al-Adxaa” ka dib markay xujayda soo guteen Ruknigii ugu weynaa Xajka ee “Banka Carafo” ilaa iyo xalay dadku way faraxsanaayeen wayna isu Hambalyeynayeen iyagoo leh Taqabala Allaah Minaa wa Minkum Saalixal Acmaal haddaba sidee looga ciiday Caasimada Soomaaliya.
Magaala madaxda Soomaaliya ee Muqdisho ayaa saaka waxa si wada jir ah looga xusay Munaasabada “Ciida Carafo” xili ay Ciidamada Gumeysiga Itoobiya iyo huwanteeda xoog iyo sharci daro ku haystaan, Barakacayaal Malyan ka badana ay ku dacdaraysan yihiin Daafaha Muqdisho,iyada oo Sidoo kale Isbitaalada Muqdisho ay Dhaawacyo badana ay buux dhaafiyeen.
Hase ahaatee Muslaliinta reer Muqdisho ayaa iyagu aan ku tukanin Barxadaha waaweyn ee ay awal ku tukan jireen Gumeysiga ka hor, halka qaar ka mid ah Masaajida ku yaala Magaalada Muqdisho aan maanta lagu tukan salaadii ciida kadib markii ay Fariisimo ka agsameysteen Ciidamada Gumeysiga Ethiopia iyo kuwa DFKMG ah.
Masaajid ay ka mid yihiin Sheekh Cali Suufi,ayaa maanta markii ugu horeysay lagu tukaday Salaadii Ciida Carafo.
Saaka markii salaada subax la Tukaydayba Dadku waxay u diyaar garoobeen salaada ciida waxayna soo lebisteen dhar cusub wejiyadooda waxaa ka muuqatay farxad iyo damaashaad waxayna rag iyo haween u soo dhaqaaqeen Masaajida kala duwan ee Muqdisho si ay ugu soo tukadaan salaada ciida.
Subaxnimadii Saaka ayaa lagu tukaday Masaajida Muqdisho, kuwaas oo la arkayay dad buux dhaafiyay Masaajida oo ku tukanaya barxada iyo laamiga Masaajida, ha yeeshee dad badan ayaan iyagu helin wax Masaajid ah ama goob ay ku tukadaan ka dib markii ay fariisimo ka sameysteen Masaajidii ku ag yaalay Ciidamada gumeysiga Ethiopia.
Maanta magaalada Muqdisho wax weeraro ama qaraxyo ah kama dhicin, kuwaasoo inta badan lala beegsan jiray Ciidamada Gumeysiga Ethiopia iyo kuwa Dowladda KMG marka laga reebo shalay galinkii danbe oo weerar socday wax ka badan saacad lagu qaaday Ciidamada Gumeysiga Ethiopia.
Si kastaba ha ahaatee waa ciidii 3-aad ee “Al-Adxa” oo ay Ciidamada Gumeysiga Ethiopia ku sugan yihiin magaalada Muqdisho, xiligaas oo Hogaankii GMIS ay ku tukadeen Magaalada Kismaayo.
Sidoo kale waxaa Maanta laga wada Ciiday dhammaan Gobollada iyo Degmooyinka dalka Soomaliya, waxaana si nabad ku jirto ay dadweynaha Soomaaliyeed oo 100% Muslim ah ay ku wada Tuktey Masajidaha, iyo Fagaarooyinka loogu tala galay inay isugu yimaadaan, waxaa markay Salaada dhammaatay la isweydaarsaday Saalamaha iyo Farxadaha, ugu dambeyntii dadka oo u socda kooxkoox ay dib uga laabteen Guryahooda.
← Sheikh Shariif is ilaali hoosna iska fiiri.
Munaasabadda Maalinta Ciidul Adxa oo si weyn looga Ciiday Magaalada Zürich iyo wadanka Switzerland oo idil. →